YEYINTNGE(CANADA): ငွေဖြည့်ကဒ် အတုတွေပေါ်
ငွေဖြည့်ကဒ် အတုတွေပေါ်နေပါတရ်။ဆိုင်မှာ ခုနလေးတင်ဖြစ်သွားတာပါ။
ဈေးဝယ်တစ်ယောက်ပထမ တသောင်းတန် တကဒ်ဝယ်သွားတယ်။ ၀ယ်ပြီး သိပ်မကြာသေးခင်မှာပဲငါးထောင်တန်နှစ်ကဒ်နဲ့ လဲပေးပါဆိုလို့လဲပေးလိုက်တရ်. ။ ခနနေတော့ သူလဲသွားတဲ့ တသောင်းကဒ်ကိုဆိုင်က ဖုန်းတလုံးထဲဖြည့်တာ ဘယ်လိုမှဖြည့်မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကိုSerial No. နဲ့တိုက် ပြီး မေးကြည့်တော့ ငွေဖြည့်ကဒ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ကထဲက သုံးထားတဲ့နံပတ် တွေပါ တဲ့။
ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်က အသိ ဆိုင်တွေ စုံစမ်းလိုက်တော့သူတို့လဲ အာ့လိုမကြာခန ကြုံနေကြပါတရ်တဲ့ ။ ငွေဖြည့်ကဒ်ဟောင်းတွေ ကိုခဲပြန်အုပ် ပလတ်စတစ်ပြန်ဖုံးပြီးအသစ်နဲ့ အဟောင်းနဲ့လဲပြီးသုံးနေကြတာပါ။ တချို့ဆို ဆယ်ကဒ်လောက်ဝယ်ပြီးမှ ငါးကဒ် လောက်ကို ငါးထောင်တန် နဲ့ ပြန်လဲခိုင်းတာပါ။ အတုတကဒ်တွေ့တာနဲ့ အောက်မှာ ပုံနဲ့ ပြထားလိုက်ပါတရ်။ တော်တော်ခွဲမရအောင် တူပါတရ်။ (တူမှာပေါ့အစစ်ကိုခဲအုပ်ပြီးအိတ် နဲ့ထည့်ထားတာကိုး) အတုကခဲခြစ်ထားတဲ့ ပေါ်မှာ MPT ဆိုတာ မပါပါဘူး။ နောက် ပလတ်စတစ်က ပိုပါးပါတရ်။
သူငယ်ချင်းတို့လဲဝယ်ရင်တခါထဲဖြည့်ခိုင်းပါ။ တခါထဲ မဖြည့်နိုင်ဖူးဆိုလဲခဲပေါ်မှာ MPT စာ ပါမပါ သေချာ စစ်ပါ။ တော်တော်လေးကို ခွဲမရအောင်တူပါတရ်။ လောလော နဲ့ဝယ်သွားရင် သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး သတိထားကြပါ...................
စတောင်မစရသေးဘူး။ ကလိန်ကကျစ်တွေကစလာပြီ။ တော်တော်အောင်မြင်ဦးမဲ့